ESI EME KA NJIKỌTA NJIKỌTA VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Esi eme ka njikọta njikọta VKontakte
Na netwọk mmekọrịta netwọk, ọtụtụ mgbe ị nwere ike ịchọta posts ndị nwere ihe oyiyi, ịpị na-ewega gị gaa ebe ọzọ, bụrụ mpaghara ọzọ VK ma ọ bụ saịtị atọ ọzọ. Ọzọ, anyị ga-ekwu maka otu ị ga - esi mezuo nke a n'onwe gị.
Mee njikọ nke njikọ VK
Ruo ugbu a, iji mepụta ihe atụ dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịmechasị onwe gị na njirimara ndị dị na saịtị VKontakte, dị ka ọrụ nke ịkọ URLs n'ime ederede ahụ. N'okwu a, ị nwere ike ịbanye n'ọtụtụ ụzọ n'otu oge, dabere na ihe ị chọrọ maka nsonaazụ.
Hụkwa: Otu esi eme ka ederede njikọ VK
Usoro 1: Nkọwa Ọhụrụ
Usoro a, n'ihi na e nwere ike ịmebe ma mgbidi nke profaịlụ onwe na na teepu obodo, ọ bụ naanị ụwa. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịdebe foto na adreesị URL na ibe onye ọzọ VC onye ọrụ, mana n'okpuru enweghị njigide nzuzo.
Mbụ ịkwesịrị ịkwado njikọ maka onyinyo ahụ site na ịpụta ya site na nchịkọta nhọrọ nke ihe nchọgharị ahụ. N'okwu a, kama URL zuru ezu, mbipụta dị mkpirikpi ga-arụ ọrụ. Ma rịba ama na enwere ike itinye foto a na adreesị kwesịrị ekwesị.
Leekwa: Otu esi belata njikọ VK
N'ihe banyere usoro a na ihe niile sochirinụ, enwere ike iwepụ prefix. "http" ma "www".
Mepụta ozi ọhụrụ, ma egbula ngwa ngwa iji bipụta ya.
Gụkwuo: Otu esi emepụta ndekọ VK
Dejupụta mpaghara ederede nke ederede na njikọ ejiri depụtaghachiri ya.
A ga-agbakwunye adreesị ahụ na folda desktọọpụ, ma ọ bụghị iji aka gị abanye!
Ugbu a, oghere ọhụrụ ga-apụta na ala nke post ahụ nwere ihe na-akpaghị aka na-ejikọta ya na nkọwa ederede.
N'oge a, ịnwere ike iwepu nsụgharị ederede njikọ ahụ.
Enwere ike ịgbanwe agbanwe site na iji usoro dị iche iche nke ọdịiche.
Ọ bụrụ na ị kwuru kpọmkwem URL kpọmkwem na ihe atụ ahụ, a ga-agbakwunye ya na post dị ka mgbakwunye oge.
Otu na-aga maka vidiyo site na saịtị saịtị Bochum.
Iji tinye ọkwa nke onwe gị, pịa na akara ngosi ahụ "Họrọ ihe atụ gị".
Na windo na-egosi, pịa "Họrọ faịlụ" ma kọwaa ụzọ nke oyiyi ahụ.
Ụlọ ọrụ VK adịghị etinye n'ihu gị nkwụsịtụ ọ bụla na nha faịlụ, mana ọ kacha mma iji ihe atụ na mkpebi nke ọbụlagodi 537 × 240 pikselụ.
Mgbe ị na-echere nbudata ahụ iji mezue, jiri ngwá ọrụ nhọrọ ịhọrọ mpaghara eserese chọrọ.
N'ihi ya, a ga-egosipụta njikọ na foto a n'okpuru nchịkọta ederede.
Ebe a bipụtara ga-enweta ihe mgbakwunye kwekọrọ na URL na foto ahụ gbakwunyere.
Na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, ọ bara uru ịtụle nuances ole na ole.
Ọ bụrụ na ị nwere ikikere ohere iji dezie ihe ndekọ, ị nwere ike itinye njikọ ozugbo na oge mgbanwe ha.
Lee kwa: Otu esi dezie ihe ndekọ VK
Enwere ike ikwusa foto na adreesị URL mgbe ị na-eke ozi ọhụrụ ma na-arụ ọrụ na nkwupụta.
N'ihe banyere nkwurịta okwu, ị gaghị enwe ike bulite ma ọ bụ họrọ ihe atụ maka njikọ onwe gị.
Kedu otu ụzọ ị si eme, cheta - ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye njikọ na-ejikarị njikọ na ọdịnaya nke ihe ndekọ ahụ.
Usoro 2: Rịba ama
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ nhọrọ mbụ anaghị adabara gị, i nwere ike itinye URL na foto site na mpaghara ahụ "Ihe edeturu". Na nke a, usoro ahụ kwesịrị ekwesị maka iji naanị n'ime ozi mgbasa ozi na mgbidi profaịlụ.
Hụkwa: Ịmepụta na ihichapụ ihe edeturu VK
Malite site na ntụziaka ndị a kpọtụrụ aha, gaa n'ụdị maka ịmepụta ihe ndekọ ọhụrụ ma gbakwunye otu edetu.
Mgbe mepere windo ahụ "Mepụta ihe edetu" kwadebe ihe di n'ime ya.
Pịa bọtịnụ òké aka ekpe na mpaghara kwesịrị ekwesị ma họrọ akara ngosi na toolbar. "Tinye foto".
Na windo "Itinye foto" pịa bọtịnụ ahụ "Bulite foto", mepee ihe atụ a chọrọ.
Pịa na onyinyo nke na-egosi na savaksụks nke nchịkọta akụkọ.
Tọọ ntọala ndị bụ isi banyere ogo nke onyinyo na ederede ọzọ.
Na igbe ederede "Njikọ" tinye URL zuru ezu nke URL nke saịtị a choro.
Ọ bụrụ na ị dee kpọmkwem ebe n'ime saịtị VKontakte, njikọ ahụ nwere ike belata. Otú ọ dị, maka nke a, ọ kacha mma iji ụdị akara wiki, nke anyị ga-atụle n'okpuru.
Ị nwere ike mezue nkwadebe nke onyinyo ahụ site na iji bọtịnụ ahụ "Chekwa".
Wepụ nchịkọta akụkọ site na ịpị ibe. "Chekwa na itinye ihe ndetu".
Mgbe edemede nke ndekọ dị otú ahụ, ịnwere ike ịchọpụta na njikọ ahụ na-arụ ọrụ site na ịpị ebe ahụ na ọdịdị e mere na mbụ na windo ịlele nyocha.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị kwesịrị ịṅa ntị na usoro ndị a, nke na-enye ohere iji nweta nkwụsi ike karị na ọrụ nke njikọ ndị ahụ. Ọ bụrụ na nke a anaghị enyere aka, jụọ ajụjụ gị n'ihe ndị a.
Usoro nke 3: Wiki Markup
Ị nwere ike iji akara ntanetịime na netwọk mmekọrịta VK naanị n'ebe ụfọdụ, nke kachasị dị mkpa maka obodo. Site n'iji asụsụ a mee ihe, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe ederede na ederede.
Hụkwa: Otu esi emepụta menu VK
N'ihe gbasara otu ìgwè, a ga-achọ ka ị jiri ọrụ ahụ rụọ ọrụ, ebe ọ bụ na mbụ eburu ya.
Gụkwuo: Ịmepụta wiki markup VK
Site na ndabara, editọ edinam wiki ahụ na-akwado ihe anyị gosiri na usoro nke abụọ. Nanị ihe dị iche bụ ngalaba ndị ọzọ ezubere maka ntọala nkwụsị na ntinye.
Jiri akara ngosi ahụ "Tinye foto" ma tinye ihe oyiyi na URL site na usoro a kọwara n'elu, ma ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na ntọala ntinye miri emi.
Ma ọ bụghị ya, họrọ akara ngosi ahụ na mbinye aka na toolbar. "Ọnọdụ Wiki Markup".
A ga-agbakwunye ọdịnaya niile na ọnọdụ a ka ị na-eleba anya na syntax nke asụsụ akara ngosi izu.
Maka iji ntinye ihe atụ pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye foto".
Ị nwere ike iji foto eburu na VK saịtị na mbụ ma chekwaa na listi.
Mgbe ị na-ebugo foto, koodu na-akpaghị aka ga-apụta na savaksụks nke nchịkọta akụkọ.
Na-emeghị mgbanwe omenala, foto ga-emeghe onwe ya na ọnọdụ nlele ihuenyo.
Ịnwere ike ịgbakwunye njikọ gị mgbe ị na-arụ mmanya ahụ, dịka ihe atụ anyị.
| 100x100px; noborder | njikọ gị]]
Ị nwere ike ịlele koodu site na ịpị njikọ ahụ. "Nkọwapụta" na ijide n'aka na ihe oyiyi achọrọ achọtara na peeji nke ị kwuru.
N'ọdịnihu, onye ọbịa ọ bụla ga-enwe ike iji njikọ ahụ.
Mgbe ị na-akọwa peeji nke ibe nke saịtị VKontakte, ị nwere ike belata URLs, na-ahapụ naanị aha nke ngalaba nwere ihe nchọpụta pụrụ iche, ileghara ngalaba aha ahụ anya.
Nkọwapụta na-enye ohere mmebi ndị a:
IdXXX- akwukwọ ọrụ;
Page-XXX_XXX- ngalaba wiki markup;
Topic-XXX_XXX- mkparịta ụka;
PublicXXX- ihu ọha;
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na nghọta ma ọ bụ enweghị ozi, ị nwere ike ịmalite ịmepụta mmepụta nke izu ụka na ngalaba ọrụ.
Arụ ọrụ a na-emetụta n'oge isiokwu ahụ bụ naanị na mbipute zuru ezu nke saịtị VK, ma a ga-enweta ngwụcha ikpeazụ site na ngwa ngwa. Nke a na - ejedebe isiokwu ahụ, n'ihi na ihe ọmụma enyere dị oke karịa iji mee ka ihe njikọ ahụ dịkwuo mma.